Daawo:- Fanaanka Fu’aad Cumar Oo Bulshada Ugu Baaqay In La Soo Caawiyo Hooyo La Daala Dhacaysa Laba Wiil Oo Xanuusanaya | Saxil News Network
Daawo:- Fanaanka Fu’aad Cumar Oo Bulshada Ugu Baaqay In La Soo Caawiyo Hooyo La Daala Dhacaysa Laba Wiil Oo Xanuusanaya
June 13, 2017 - Written by Abdisalaan Harir
Hargeysa (Saxilnews) Fanaanka Soomaaliyeed ee Fu’aad Cabdi Cumar ayaa umada muslimiintga ah meelkasta oo ay joogaan ugu baaqay in la soo caawiyo hooyo Jawaahir Yaasin oo heysta laba wiil oo xanuusanaya.
Fanaanka Fu’aad oo hooyadani ku booqday gurigeeda ayaa bulshada u soo jeediyay in hooyadan la caawiyo lana taageero,hoosna loo eego si loola qaybsado dhibaatada heysata iyada iyo labadeeda wiil ee xanuusanaya.
Hooyo Jawaahir Yaasin waxaa ay degan tahay xaafada Sheekh Cumar Yuusuf ee koonfur galbeed magaalada Hargeysa, waxaanay ka mid tahay dadkii danyarta ahaa ee laga raray gudaha magaalada Hargeysa.
Hooyadani waxaa ay heysata laba wiil oo walaalo ah oo xanuunka dhimirka qaba, da’ahaana aan kala weynayn mudo sideed sanadood ahna xanuunkan qabay.
Labadana wiil gurigooda markii aan galay sacadu waxaa ay aheyd 7:30-subaxnimo, guriga ay degan yihiin waa guri jiingada, labada wiil midi waxaa uu ka xidhnaa oo silsiladii kaga xidhneyd labada lugood ka kalena waxaa ay kaga xidhneyd laba lugood iyo gacan.
Midi waxaa uu ku jiifay caw midina waxaa uu ku jiifay furaash, dhulka hoosena waxaa laga xigsiiyay jiingad si daadka guriga soo galey aanu uga qoynin gogoshan ay ku jiifaan.
Labada wiil aabahood waa uu dhintay hooyadoodna waa bila-camal waana qoys qaada ma dharge ah awoodooda dhaqaalena ay tahay mid aad u liidata.
Waxaanay Hooyo Jawaahir ii sheegtay inaanay heyn awood dhaqaale oo ay wiilsheedan ku geyso goob caafimaad si ay wax uga ogaato xanuunka wiilasheeda hayaa mudada sideeda sanadooda.
Sidoo kale waxaa ay intaas ku dartay in walaalkeed oo caruurta abtigooda iyo wiilkale oo ay dhashay ay bukaan socod yihiin oo iyaguna aanay labadan wiil ee xidh xidhan aanay waxba dhaamin, taasina ay dhaxal-siisay inaanay qaban wax hawlo shaqo ah kaliyana ay ka fikireyso heynta iyo kala ilaalinta wiilashan xidhan.
Waxaanay qofkasta oo muslina gudo iyo dibadba ay ka codsaneysaa in ay Illaahey dartii u soo caawiyaan wixii ay ku tari karaana ay ku taraan maada lagu jiro bishii barakeysneyd ee Rabadaan, iyagana xaaladoodu tahay mid iska barakeysan.
Cidii wax ku dhaantaana ha kala xidhiidho Telefoonkeeda gacanta oo ah 0634076671